Tanàn-dehibe nomerika - ahoana no ahafahantsika manararaotra ny haitao toa ny atolotry SIEMENS - Geofumadas
March, 2020 Engineering, fanavaozana
Resadresaka tany Geofumadas tany Singapore niaraka tamin'i Eric Chong, filoha sy CEO, Siemens Ltd.
Ahoana no fomba nanamora kokoa ny Siemens ho an'izao tontolo izao mba hanana tanàna maranitra kokoa? Inona avy ireo fanatitra lehibe omenao an'izany?
Miatrika fanamby ny tanàna noho ny fiovana nateraky ny megatrends of urbanization, ny fiovan'ny toetrandro, ny fanatontoloana sy ny demografika. Amin'ny fahasamihafan'izy ireo rehetra dia mamorona angon-drakitra be dia be izy ireo izay azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fanodinkodinam-peo fahadimy amin'ny fahazoana vaovao ary hahomby ireo rafitra izay manohana ny fotodrafitrasa an-tanandehibe.
Ao amin'ny Siemens, izahay dia nanamboatra MindSphere, rafitra fiasan'ny lozisialy IoT miorina eo amin'ny rahona, mba hahafahan'ity 'tanàna mahira-tsaina' ity. Mindsphere dia nomanina sehatra "Best in Class" ho an'ny IoT nataon'i PAC. Miaraka amin'ny fahaiza-manaony Open Platform-as-a-Service dia manampy ny manampahaizana manokana hamorona vahaolana tanana an-tsaina. Amin'ny alàlan'ny fahaiza-manaon'ny MindConnect, manome alalana ny fifandraisana azo antoka momba ny Siemens sy ny vokatra sy kojakoana an'ny mponera fahatelo mba haka ny angona tena izy ho an'ny famakafakana angon-drakitra izay ahafahan'ny rindranasa Smart Cities isan-karazany. Ny angon-drakitra nangonina avy ao an-tanàna amin'ny ankapobeny dia mety ho lasa hevitra ho an'ireo mpanomana ny tanàna sy mpanamboatra politika hambara momba ny fampandrosoana ny tanàna hendry. Miaraka amin'ny fanohizan'ny famakafam-pahaizana momba ny artifisialy sy data, ny fizotran'ny fanodinana angon-drakitra ho fahatakarana sy famoronana hevitra vaovao ho an'ny fangatahana tanàna hendry izay afaka manampy amin'ny famonoana ireo fanamby any an-tanànan'ny megatrends sy manatsara bebe kokoa ny mety hisian'ny teknôlôjia. tanàna marani-tsaina.
Miha haingana kokoa ve ny tanàna? Ahoana no fahitanao ny fandrosoana? Ahoana no ahafahan'ny orinasa toa ny Siemens hanampiana ny hafainganam-pandeha?
Manjary bebe kokoa ny fampandrosoana ny tanàna maranitra izao tontolo izao. Ireo mpandray anjara tahaka ny governemanta, mpamatsy fotodrafitrasa, mpitarika ny indostria, dia miasa am-pahavitrihana mba hampandeha fanovana. Tany Hong Kong, ny governemanta dia namoaka ny Blueprint Smart City tsara indrindra tamin'ny taona 2017, izay nametraka ny vina ho an'ny fampandrosoana ny Tanànantsika Smart miaraka amin'ny Blueprint 2.0 teny an-dalana. Ho fanampin'ny fametrahana torolàlana mazava ho an'ny indostria, manome tolotra ara-bola toa ny famatsiam-bola sy fihenan'ny hetra ihany koa ny governemanta hanohanana ny fandrosoana sy ny fihenan'ny fanavaozana amin'ity lohahevitra mitombo ity. Ny tena zava-dehibe kokoa dia ny fandraisana andraikitra matotra ao an-tanàna toa ny Energizing Kowloon East, izay misy ny porofo. Tena faly izahay mizara ny traikefantsika amin'ny PoC toy izany, ohatra:
Kerbside Upload / Download Fanaraha-maso ny rafitra - Innovation hahomby amin'ny manan-kianja be lanja sy ny manampy ireo mpampiasa miditra ny fika misy / upload maimaim-poana miaraka AI.
Angovo rafitry ny angovo azo avy amin'ny angovo - Fametrahana sensor amin'ny herinaratra ao an-trano ho an'ny tahirin-kevitra fanjifana herinaratra ao an-trano mba ahafahan'ny mpampiasa manara-maso ny fomba fanjifana miaraka amin'ny fampiharana finday mba hanatsarana ny fahazarana herinaratra.
Ho fanampin'ny mitondra ny fahaizantsika manerantany, mino izahay fa afaka manampy amin'ny fananganana tontolo iainana miroborobo eo amin'ny fanavaozana mivoatra isika. Noho izany tanjona izany dia nametraka ao amin'ny Smart City Digital Hub ao amin'ny Science Science izahay mba hanome sehatra ho fanombohana, manam-pahaizana momba ny haitao ary ny mpamatsy fotodrafitrasa hananganana ny portfolio-diany ary hamolavola ny rindranasan'ny tanàna mahay.
Ny ezaka ataontsika any Hong Kong dia manako ny ezaka ataontsika any an-kafa manampy ny tanàna ho lasa hendry kokoa. Ohatra, any Grande-Bretagne, miara-miasa amin'ny London izahay amin'ny fananganana ‘Arc of Opportunity’. Izy io dia modely amin'ny Smart City izay tarihin'ireo sehatra tsy miankina ao amin'ny faritra ary amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Greater London Authority, izay misy andiana hetsika marim-pototra hoentina mifantoka amin'ny angovo, ny fitaterana ary ny trano.
Any Vienna, Aotrisy, isika dia miara-miasa amin'ny tanànan'i Aspern amin'ny drafitra fanandramana sy rafitra fanandramana Smart Cities Demonstration Laboratory ho an'ny tanàna hendry, mifantoka amin'ny fahaiza-manao angovo sy fotodrafitrasa marani-tsaina ary mamolavola vahaolana ho an'ny angovo azo havaozina, fanaraha-maso grid. volavolan-tena ambany, fitahirizana angovo ary fifehezana manan-tsaina amin'ny tambajotra fizarana.
Inona no nahatonga anao hieritreritra ny hanangana afovoan-tanàna maranitra?
Ny fahitantsika ny Smart City Digital Center dia ny hanafainganana ny fampandrosoana an-tsaina amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa sy fampandrosoana fampandrosoana. Namboarina avy amin'ny MindSphere, rafitra fiasa IoT miorina ao Siemens, ny foibe dia natao ho toy ny laboratoara misokatra izay ahafahan'ny R&D amin'ny tranobe, angovo ary fihetsehana. Amin'ny fanatsarana ny fifandraisana fifandraisana amin'i IoT, ny tarika nomerika dia mikendry ny hanampy ny mpandray anjara hahafantatra ny fahalemen'ny tanàna sy ny orinasa manohana ny fanitarana ny orinasan'izy ireo amin'ny isaina.
Manantena izahay fa ny foibe dia manangana talenta ho avy any Hong Kong hanohana ny fahabetsahan'ny tanàna hendry. Noho izany antony izany, ny ivon-toerana dia nanomboka ny Akademia Mindsphere mba hanome fiofanana sy hiara-hiasa amin'ny Vondrom-piofanana ho an'ny Vocational mba hanampiana ny hanomezana izay ilain'ny mpiasa ary hamporisika ireo mpandray anjara amin'ity orinasa ity.
Inona avy ireo fiasa lehibe amin'ity ivontoerana ity?
Ny ivon-tananan'ny Smart City Digital Center dia mikendry ny hamorona ecosystem fanavaozana ny tanàna mahomby amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka eo an-toerana toy ny mpanome fotodrafitrasa, andrim-pampianarana, ary fanombohana. Ny ivon-toerana dia mikendry ny ho toy ny mpampitambatra hizara fahalalana momba ny teknolojia IoT mandroso, mandrisika ny sehatra hanokatra data ho an'ny rindranasan'ny tanàna hendry, hamoaka fampahalalana ho an'ny fijerena ny fotodrafitrasa momba ny fotodrafitrasa ao an-tanàna ary handinika ireo fangatahana tanàna hendry. Ny tanjona farany dia ny fananganana tanàna mahay any Hong Kong ary hanatsara ny fahaiza-miaina sy ny fahombiazan'ny tanànantsika.
Aiza faritra no ahitanao ny fandrosoana indrindra amin'ny fanovana anarana?
Hitanay ny fandrosoana eo amin'ny sehatry ny fananganana, angovo sy fanetsiketsehana izay mahasoa indrindra amin'ny fanodinana.
Ny trano no mpanjifa angovo lehibe indrindra ao an-tanàna, mandany ny 90% -n'ny herinaratra ao Hong Kong. Misy hery lehibe hanatsarana ny fahombiazan'ny angovo trano, mampihena ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana, ary mitantana ny habaka anatiny amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny teknolojia avotra AI. Ohatra, ny rafi-pitantananay «AI Chiller» dia manome ny fanaraha-maso ny toe-java-misy 24x7 momba ny zavamaniry chiller, izay avy hatrany dia manome soso-kevitra amin'ny ekipa mpanao trano hananganana ny asany hatrany. Ohatra iray hafa ny «tranobe izay afaka miresaka» izay mifandray am-bava amin'ny rafi-angovo hamoronana ekosistemika izay mamaly ny filàn'ny trano sy ny mpiasany raha mbola miantoka ny fampiasana ny angovo sarobidy ao an-tanàna mahomby sy mavitrika fomba.
Ao amin'ny tanànan'ny mponina be mponina toa an'i Hong Kong, misy ny fahaiza-manao lehibe amin'ny fanamboarana fanavaozana mazoto ho an'ny mponina ao aminy. Ny fanavaozana ao amin'ny V2X (ax-fiara) dia mamela ny fifampiresahana tsy tapaka eo amin'ireo fiara sy ny fotodrafitrasa manohana ny fampiharana toy ny vahaolana fanaraha-maso manan-talenta amin'ny fitantanana ireo toe-javatra fifamoivoizana sarotra eo amin'ny làlana an-tanàn-dehibe. Ny teknôlôjia toy izany rehefa apetraka amin'ny ambaratonga dia fanalahidy hahafahana mampandeha ny fampandehanana fiara azo antoka sy azo itokisana manerana ny tanàna.
Lazao anay ny fiaraha-miasa eo amin'ny Bentley Systems sy Siemens: Ahoana no anampiana ny fiaraha-miasa amin'ny sehatry ny fotodrafitrasa?
Ny Siemens sy ny Bentley Systems dia manana tantara iray hanampiana ny portfolio-ny tsirairay avy amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana ara-teknolojia tsirairay mba hanomezana vahaolana amin'ny sehatry ny orinasa digital. Niroso tamin'ny alalàn'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fampidirana ireo modely ara-teknika niomerika nomerika miaraka amin'ny tetik'asa fampiasam-bola miaraka. Mifantoka amin'ireo kambana nomerika sy manova ny MindSphere, ny fiaraha-miasa dia mampiasa modely injeniera dizitaly ho an'ny hetsika ara-maso sy fanatanterahana ny fotodrafitrasa mifandray izay ahafahan'ny fampiharana mandroso toy ny vahaolana "Simulation as a service" ho an'ny tsingerin'ny fiainana. Mampihena ny vidin'ny tsingerin'ny fiainana hatramin'ny fahombiazan'ny famolavolana ny famolavolana sy ny fanatanterahana ary ny fandidiana azo tanterahina amin'ny alàlan'ny simulation ny kambana dizitaly miaraka amin'ny fanatanterahana izany rehefa manomboka ny fanantenany sy ny fepetra rehetra. Ny tontolon'ny angon-drakotra manan-danja momba izany dia manome fanavaozana nomerika farany sy miafara amin'ny famolavolana kambana nomerika momba ny fizotrany sy ny fananana ara-batana. Tao anatin'ny fiaraha-miasa farany dia nanokatra ny «View View to Connect, Contextualize» ary "Validate" ary "Visualize Plant Data" ny roa tonta mba hamoronana kambana nomerika mivantana ho an'ireo mpampiasa hahita fijery vaovao. Any Hong Kong, ny ivon-tanànan'ny digital nomerika hendry dia mikaroka lohahevitra mitovy amin'izany miaraka amin'i Bentley mba hamoronana lanja ny mpanjifa ary hanafainganana ny fanovana ny tanàna marani-tsaina.
Inona no tianao holazaina amin'ny hoe Connected City Solutions?
Ny Connected City Solutions (CCS) dia mampiditra ny Internet of Things, computing cloud ary ny teknolojia momba ny fifandraisana ahafahana manohana ny fitantanana tanàna ary ahafahan'ny fireneny. Miaraka amin'ny angon-drakitra nalain'ny mpamatsy sy saina marani-tsaina nampidirina sy natanatan'ny MindSphere, ny vahaolana azon'ny tanàna mifandray dia manaparitaka ny fandehanana an-tanàna amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny fifandraisana IoT sy ny fanangonana sy ny fanadihadian'ny tanàna. Ny fihanaky ny vavan'ny IoT ao an-tanàna dia ahafahan'ny fanangonana ny angon-drakitra momba ny tontolo iainana, ao anatin'izany ny famirapiratan'ny tontolo iainana, ny fifamoivoizana an-dalambe, ny angon-drakitra momba ny tontolo iainana ao ny mari-pana, ny hamandoana, ny tsindry, ny tabataba, ny haavon'ny fihozongozona ary ny singa miato. Ny angon-drakitra voaangona dia azo atombina miaraka amin'ny faharanitan-tsaina amin'ny artifisialy mba hanomezana vaovao na hanambara mialoha ny hoavin'ny fanamby an-tanandehibe samihafa. Mety hiteraka hevi-dehibe niovaovan'ny drafitra ao an-tanàna hamahana ireo fanamby any an-tanàna toy ny filaminam-bahoaka, ny fitantanana ny fananana, ny fahombiazan'ny angovo ary ny fitohanan'ny fifamoivoizana.
Ahoana ny fanampiana an'i Siemens hanangana vondron'ireo mpamorona tanàna mahay amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny fampianarana?
Ny Siemens Smart City Developer Community (SSCDC) dia natsangana tamin'ny 24 Janoary 2019 ho fanitarana ny seranan-tsainay an-tànana dizitaly ho tonga lafatra sy hanitarana ny herin'ny Mindsphere. Mandray anjara mpiara-miasa, manam-pahaizana momba ny haitao, SME, ny SSCDC, ary manomboka amin'ny fampandrosoana an-tanàna amin'ny alàlan'ny fizarana fahalalana, hevitra fiaraha-miasa, tamba-jotra ary fifandraisana amin'ny fiaraha-miasa. Manana tanjona 4 lehibe izy:
Fanabeazana: Manome fiofanana YoT mandroso, atrikasa fiaraha-miasa ary seminera mifantoka amin'ny tsena mba hanohanana ny talenta, injeniera, akademia ary CXO amin'ny famolavolana vahaolana dizitaly lehibe.
Networking: Manamboara tambajotra matihanina amin'ny alàlan'ny famoronana vondrona liana manokana miaraka amin'ny fanombohana, SME ary multinationals miaraka amin'ny varotra amin'ny tambajotra isan-karazany.
Co-famoronana: Leverage MindSphere ho sehatra an-tserasera ho an'ny fiaraha-miasa amin'ireo olona mitovy hevitra mba hanova ny foto-kevitry ny indostria ho fampiharana ny tena izy.
Fiaraha-miasa: fotoana ahafahana manondro ny mety ho fanombohana sy SME amin'ny tambajotran'izao tontolo izao hanombohana sy fifandraisana indostrialy mba hanomezana ireo mpikambana miaraka amin'ny fahalalana sy ny fampiasam-bola hamahana ny vahaolana miaraka amin'ny MindSphere.
Ny vondrom-piarahamonina koa dia manome vahana ny tontolo iainana voajanahary mifamatotra amin'ny orinasa mba hahatohitra ny fanelingelenana ara-teknolojia nateraky ny IoT, hanitatra ny orinasan-dry zareo, ary hiatrika ireo fanamby maika ataon'ny tanàna vao misondrotra. Tao anatin'ny herintaona latsaka, ny SSCDC dia manana mpikambana maherin'ny 120 miaraka amina hetsika 13 eo amin'ny fiarahamonina manomboka amin'ny atrikasa IoT amin'ny tanana hatramin'ny MindSphere Solution Day, manokatra ny mety ho IoT ary miteraka fifanakalozan-kevitra momba ny fotoana ahafahana mamorona fiaraha-miasa.
Misy hafatra tianao omena ny orinasa / mpampiasa fanorenana.
Ny Digitization dia mitondra fiovana manelingelina amin'ny indostria maro izay mety handratra raha tsy raharahahivina, fa fotoana iray kosa raha alaina. Ao amin'ny indostrian'ny fananganana izay fanamby amin'ny alàlan'ny fihenan'ny vokatra sy ny vidiny, ny tsingerin'ny fiainana iray manontolo dia afaka mahazo tombony amin'ny isa.
Ohatra, ny fanamboarana ny mombamomba ny fampahalalana dia afaka mandrafitra trano iray saika ara-batana, ary manomboka ny fananganana rehefa vita ny virtoaly amin'ny fanantenany rehetra. Izany dia azo hatsaraina miaraka amin'ny MindSphere, izay mamela ny angon-drakitra, fanamafisana ary famakafakana mandritra ny tsangam-panamboarana, fanokafana zavatra maro mifantoka amin'ny kambana nomerika an'ny tetikasa. Izany dia mamela ny fampidirana ny haitao toy ny famokarana additive izay afaka manampy amin'ny famoronana singa manangana trano avy amin'ny kambana digital fa hanafaingana ny fananganana Modular Integrated Building (MiC) ho an'ny dingana fanamboarana mahomby kokoa.
Hanova ny fizotran'ny fanaraha-maso sy ny fanamarinana, izay mbola eo am-pitaterana, ny fanavaozana ny teknolojia blockchain dia ahafahan'ny fitantanana sy fanaraha-maso ireo tetikasa nomerika, hiantoka ny fangaraharana, ny fahamarinan'ny rakitsoratra ary ny fanatsarana ny fahombiazana. Ny Digitization dia manome fotoana be dia be ary manova ny fomba fanamboarana, hiaraha-miasa, ary hiasa, manatsara betsaka ny asa fanamboarana ary mampihena ny vidin'ny tetikasa amin'ny ankapobeny, ary manome tombony azo refesina mandritra ny tsingerin'ny fiainana amin'ny trano. .
Miara-miasa amin'ny orinasa hafa koa i Siemens hanangana teknolojia fanapahana ahafahana mamorona / fikojakojana ny tanàna marani-tsaina?
Misokatra foana ny Siemens hiara-miasa amin'ny orinasa hafa ary tsy voafetra ho an'ny orinasa.
Siemens dia nanao sonia ny fahatsiarovana ny fahatakarana sy nanorina fiadiana marobe tany Hong Kong mba hanafaingana ny fampandrosoana ny tanàna maranitra, ohatra:
Smart City Consortium (SCC) - Mampifandray ny MindSphere amin'ny vondron-tanàna hendry any Hong Kong mba hampisehoana ny fomba ahafahan'ny MindSphere manangana sehatra IoT tanàna.
Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP): fiaraha-miasa mialoha amin'ny famolavolana vahaolana an-tanàna miaraka amin'ny IoT sy ny analytics data.
CLP: Mamolavola tetik'asa mpanamory fiaramanidina ho an'ny tsenan'ny herinaratra, tanàna marani-tsaina, famokarana herinaratra ary tontolo iainana.
MTR: Mamorona vahaolana nomerika hijerena ny asa fanamboarana lalamby amin'ny alalàn'ny analytics
VTC: Mamboly ny talenta amin'ny taranaka ho avy mba hahazoana antoka ny faharetan'ny tontolo iainana maoderina ary hitondra hevitra vaovao ho an'ny fanavaozana ho avy.
Tamin'ny volana Janoary tamin'ity taona ity dia nandray anjara tamin'ny GreaterBayX Scalerater Programme ihany koa i Siemens, fandraisana andraikitra miaraka amina orinasa mpanombohana sy orinasa lehibe toa an'i Greater Bay Ventures, HSBC ary Microsoft hanampiana ireo mpikatroka hahatakatra ny fahitany tanàna marani-tsaina ary hanararaotra ireo fotoana mitombo ao ny faritra bay lehibe kokoa miaraka amin'ny fahalalanay momba ny sehatra.
Previous Post«Previous Digital Twin - Philosophy ho an'ny revolisiona nomerika vaovao
Next Post Geofumadas - amin'ny fironana amin'ity fotoana nomerika itymanaraka »